उपाधी कसकाे ? चितवन या घरेलु टाेलि पाेखराकाे ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
उपाधी कसकाे ? चितवन या घरेलु टाेलि पाेखराकाे !
काे हुन् हेर्नुपर्ने खेलाडी ?
२०७५ कात्तिक १९ सोमवार
काठमाडौँ, १९ कात्तिक । पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को पहिलो संस्करणको फाइनल खेल मंगलबार हुँदैछ । फाइनल खेल घरेलु टोलि पोखरा पल्टन र चितवन राइनोज बिच हुँदैछ । पोखराको कप्तानी सरद भेषावकरले सम्हाल्दैछन् भने चितवनको पारस खड्काले ।
अाइतबार भएकाे नकअाउट खेलमा काठमाडाैँ राेयल्समाथि ६ विकेटकाे सहज जित निकाल्दै चितवन फाइनल पुगेकाे हाे । भने पाेखराले अंक समान भएपनि नेटरनरेटमा पछि पार्दै समूह विजेता बनेर फाइनल पुगेकाे हाे । एक वर्ष भित्रै पारस र सरदकाे उपाधीका लागि याे दाेस्राे भेट हाे । यस अघि एभरेष्ट प्रिमियर लिग इपिएल काे फाइनलमा सरदकाे कप्तानीमा रहेकाे विराटनगर वरियर्स र पारस खड्काकाे भैरहवा ग्लाडियटर्स भिडेका थिए । राेमाञ्चक खेलमा पारसकाे भैरहवाले विराटनगरलाई १ रनले हराएकाे थियाे ।
चितवनले हेर्नुपर्ने खेलाडी
चितवनका लागि पाेखराका इन्दर सिंह खतरनाक सावित हुन सक्छन् । उनले ५ खेलमा ३४ रनकाे अाैषतमा १ सय ७० रन बनाएका छन् । उनले समूहचरणकाे खेलमा चितवन कै खिलाफ ६५ रन बनाएका थिए । त्यस्तै अाशिफ शेख पाेखराका लागि धेरै रन बनाउने दाेस्राे खेलाडी हुन् । उनले २२ रनकाे अाैषतमा ५ खेलमा १ सय ११ रन बनाएका छन् । उनकाे सर्वाधिक रन विराटनगर विरुद्धकाे ५२ रहेकाे छ ।
पाेखराका ललित नारायण राजवंशीलाई पनि चितवनले बेवास्ता गर्नेछैन । दायाँ हाते स्पिन बलर ललितले यस प्रतियाेगितामा ५ खेलमा ९ विकेट लिएका छन्। उनले विराटनगर विरुद्ध ४ अाेभरमा मात्र १७ रन दिएर ३ विकेट लिएका थिए। सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीकाे सूचीमा उनी चाैँथाे नम्बरमा छन् । त्यस्तै पाेखराका रसिद खानल‍े ५ खेलमा ७ विकेट लिएका छन् । अन्त्यमा अाएका अाक्रामक ब्याटिङ् पनि गर्न सक्ने रसिद चितवन माथि भारी पर्न सक्छन् ।
पाेखराले हेर्नुपर्ने खेलाडी
पाेखराले हेर्नुपर्ने चितवनका खेलाडीमा सबैभन्दा पहिलाे नाम सनी पटेल अाउँछ । उनले ७५ काे अाैषतमा १ सय ५१ रन बनाएका छन् । सनीले विराटनगर टाइटन्स विरुद्धका सर्वाधिक अभिजित ५१ रन बनाएका थिए । उनले १ सय ६५ भन्दा माथिकाे स्ट्राइक रेटमा रन बनाउँछन् । त्यस्तै चितवनका हरिशंकर शाह पाेखराका लागि समस्या खडा गर्न सक्छन् । उनले ६ खेलमा १ सय ४३ रन बनाएका छन् । उनकाे सर्वाधिक रन काठमाडाैँ राेयल्स विरुद्धकाे ६० हाे ।
चितवनका करण केसीले पाेखरालाई बलिङ ब्याटिङ दुवैमा दबाब दिन सक्छन् । राष्ट्रिय टाेलिका भरपर्दा अलराउ‌‌ण्डर भएकाले पनि सरद चनाखाे हुनेछन् । करण प्रतियाेगिताकाे सर्वाधिक विकेट लिने खलाडीकाे सूचीमा शिर्ष स्थानमा रहेका छन् । उनले ६ खेलमा ११ विकेट लिएका छन् । उनले पाेखरा विरुद्ध नै समूह चरणकाे खेलमा १९ रन खर्चेर ३ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै प्रतियाेगिताका नम्बर एक अलराउण्डर सनी पटेल माथि पाेखराकाे विशेष निगरानी हुनेछ । उनी ६ खेलमा ९ विकेट लिएर सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीकाे सूचीमा तेस्राे नम्बरमा छन् ।
खेलकाे उपाधी जुन टाेलिले जितेपनि फाइनल खेल निकै राेमाञ्चक हुने भने निश्चित छ ।